यौन उत्पीडन निर्दिष्ट केन्द्र (Sexual Assault Referral Centre, SARC) – Nepali – First Light
Home/4. About Sexual Violence/5. Our Sexual Violence Services/यौन उत्पीडन निर्दिष्ट केन्द्र (Sexual Assault Referral Centre, SARC) – Nepali
स्विन्डन र विल्टशायर यौन उत्पीडन निर्दिष्ट केन्द्र (SARC)
यौन उत्पीडन निर्दिष्ट केन्द्र (SARC) भनेको बलात्कार वा यौन उत्पीडनका उत्तरजीवीहरूले तत्काल मद्दत र सहायता प्राप्त गर्न सक्ने एक सुविधाप्राप्त स्थल हो।
उत्तरजीवीहरूले कुनै अनुभवी र योग्य डाक्टर वा नर्सद्वारा गरिने फोरेन्सिक चिकित्सा परीक्षणमा पहुँच गर्न छनौट गर्न सक्छन्।
यस परीक्षणको क्रममा समग्र कल्याण जाँच गरिन्छ र प्रहरी रिपोर्ट गरेमा प्रमाणको रूपमा प्रयोग गर्नका लागि शरीरबाट केही स्वाबहरू लिने विकल्प पनि छ।
आघातसम्बन्धी जानकारी भएको संकट कार्यकर्ताको सहयोगमा उत्तरजीवीहरू प्रक्रियाका लागि सहज र नियन्त्रणमा छन् भनी सुनिश्चित गर्न उनीहरूलाई परीक्षण गरेर मार्गदर्शन गरिने छ। प्रत्येक व्यक्तिका लागि व्यक्तिगत रूपमा सहायता प्रदान गरिने छ र प्रश्नहरू सोध्ने, सुन्ने र यौन स्वास्थ्य जोखिमहरूका बारेमा आश्वस्त हुने समय र ठाउँ पनि प्रदान गरिने छ।
स्वयं-निर्दिष्टको रूपमा उपस्थित हुँदा अर्थात् प्रहरीसँग संलग्न नभइकन केन्द्रमा फोन गर्दा, उत्तरजीवीहरूले चाहेमा उनीहरूका लागि घटनाका बारेमा प्रहरीसँग कुरा गर्ने अवसरको व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ।
SARC मा हामी तपाईंको विषयमा फैसला गर्ने छैनौं, हामी तपाईंमाथि विश्वास गर्ने छौं र तपाईंका यसपछिका विकल्पहरू के छन् भनेर पत्ता लगाउन तपाईंसँग काम गर्ने छौं।
तपाईंमाथि बलात्कार वा यौन उत्पीडन भएको छ भने, तपाईं सिधै SARC लाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ वा प्रहरीसँग सिफारिस लिएर आउन सक्नुहुन्छ।
तपाईंले हामीलाई सिधै सम्पर्क गर्नुभयो भने, तपाईं अज्ञात रहन सक्नुहुन्छ र प्रहरीलाई कसरी संलग्न गर्ने र कुनै प्रमाणका नमुनाहरूसँग के गर्ने भन्नेबारे सोच्नका लागि चाहेजति समय पाउनुहुन्छ। हाम्रा विशेष तालिमप्राप्त संकट कार्यकर्ताहरूले प्रहरीलाई संलग्न गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नमा मद्दत गर्न सक्छन्। तपाईं स्वयं-निर्दिष्टको रूपमा संकट कार्यकर्तालाई सोमवारदेखि आइतवारर, बिहान 08.00 बजेदेखि बेलुकी 20.00 बजेसम्म 01793 781917 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ।
तर पनि, तपाईंले पहिले नै प्रहरीलाई सम्पर्क गर्न रोज्नुभएको हुन सक्छ। त्यसो हो भने, उनीहरूले अवश्य तपाईंको पहिचान थाहा पाउने छन् र आफ्नो अनुसन्धानका लागि कुनै पनि प्रमाणका नमुनाहरू राख्ने छन्। प्रहरी सिफारिसहरू वर्षको 365 (6) दिन, 24/7 उपलब्ध हुन्छन्।
प्रहरी संलग्न भए वा नभए तापनि, SARC ले तपाईंलाई आवश्यक पर्ने सहयोग र सेवाहरू प्रदान गर्दछ। हाम्रा सबै सेवा गोप्य रहन्छन्। तर पनि, कुनै बालबालिका वा युवा वा कमजोर वयस्कलाई सार्थक हानीको जोखिम भएको मानिन्छ भने प्रहरी र/वा बालबालिकाको सामाजिक हेरचाहसँग जानकारी साझा गर्नु (बालबालिका ऐन 2004 र बालबालिकाको सुरक्षाका लागि मिलेर काम गर्ने) हाम्रो कानुनी कर्तव्य हो।
तपाईं जहिले पनि आफूलाई के हुन्छ भन्नेबारे छनौट गर्न सक्षम हुनु हुने छ।
तपाईंले SARC लाई सम्पर्क गर्दा के हुन्छ भन्ने कुराका लागि यहाँ एक चरणबद्ध मार्गदर्शक छ:
चरण 1: अपोइन्टमेन्ट लिनुहोस्
तपाईं 01793 781917 मा सम्पर्क गरेर SARC मा उपस्थित हुन अपोइन्टमेन्ट लिन सक्नुहुन्छ। तपाईंले कल गर्दा तपाईंलाई उपलब्ध विकल्पहरूका बारेमा स्पष्टीकरण दिइने छ, साथै तपाईंले रोज्नुभएको हो भने अपोइन्टमेन्टको समय पनि दिइने छ। SARC मा प्रहरीको संलग्नता बिना नै अपोइन्टमेन्ट लिन सकिन्छ। तपाईंले कुनै संकट कार्यकर्तालाई भेट्न सक्नुहुन्छ जसले तपाईंको हेरचाह गर्ने छ र उपलब्ध विकल्पहरूको व्याख्या गर्ने छ।
तपाईंले प्रहरीलाई बोलाउनुभयो भने, उनीहरूले तपाईंका लागि अपोइन्टमेन्टको व्यवस्था मिलाउने छन् र तपाईंलाई SARC मा साथ दिने छन्। कुनै विशेष तालिमप्राप्त अधिकारीले तपाईंको हेरचाह गर्ने छन्। यौन अपराध अनुसन्धान टोली अधिकारी (SOITs) ले तपाईंको हेरचाह गर्ने छ।
चरण 2: तपाईं आइपुगेपछि
तपाईं आफ्नो अपोइन्टमेन्टमा आइपुगेपछि संकट कार्यकर्तासँग कुरा गर्नु हुने छ। उनीहरूले तपाईंका व्यक्तिगत विवरणहरू टिप्ने छन्, तपाईंका लागि उपलब्ध सबै विकल्पका बारेमा व्याख्या गर्ने छन् र अब के हुन्छ भनेर छलफल गर्ने छन्।
चरण 3: फोरेन्सिक परीक्षण
कुनै विशेषज्ञ डाक्टर/नर्सद्वारा सकेसम्म संवेदनशील रूपमा फोरेन्सिक चिकित्सा परीक्षण गरिने छ। यस परीक्षणलाई अगाडि बढाउने निर्णय पूर्णतया तपाईंमा निर्भर छ र तपाईंले प्रहरीलाई संलग्न गरे वा नगरे तापनि यो परीक्षण गर्न सकिन्छ। तपाईं कुनै पनि समयमा परीक्षण रोक्न सक्नुहुन्छ।
फोरेन्सिक परीक्षणहरू उत्पीडनपछि सकेसम्म चाँडो भएमा राम्रोसँग गर्न सकिन्छ, यद्यपि यो तपाईंले गर्न मन लागेको अन्तिम कुरा हुन सक्छ। परीक्षणहरूले के भएको हो भन्नेबारे र तपाईंका आक्रमणकारीका बारेमा प्रमाण प्रदान गर्न सक्छन् – तपाईंले प्रहरीलाई संलग्न गर्ने छनौट गरेमा र गर्दा यस प्रमाणको प्रयोग गरिने छ।
चरण 4: सल्लाह
फोरेन्सिक परीक्षणमा, डाक्टर/नर्सले उपयुक्त लागेमा तपाईंलाई गर्भावस्था परीक्षण गर्न र/वा आपतकालीन गर्भनिरोधक दिन सक्छन्। फोरेन्सिक परीक्षण गर्दा डाक्टर/नर्सले सामान्यतया यौन सम्पर्कबाट सर्ने सङ्क्रमणहरू (STIs) का लागि जाँच गर्दैनन् किनभने तिनीहरूको परीक्षण त्यति छिट्टै हुँदैन। तर पनि, उनीहरू यसबारेमा तपाईंसँग कुरा गर्न सक्छन् र तपाईंलाई STIs को जाँच गर्नका लागि विशेषज्ञप्राप्त क्लिनिकमा जान सिफारिस गर्ने छन्।
चरण 5: फलो-अप
बलात्कार वा यौन उत्पीडनका प्रभावहरूको सामना गर्न धेरै गाह्रो हुन सक्छ र यसलाई समाधान गर्न समय पनि लाग्न सक्छ भन्ने कुरा हामी बुझ्दछौं। तपाईंलाई मद्दत गर्न SARC ले निम्न कुराहरूको पहुँच प्रदान गर्न सक्छ:
· यौन स्वास्थ्य सेवाहरू
· SARC का कुनै संकट अधिवक्ताको सहयोग
· कुनै स्वतन्त्र यौन हिंसा सल्लाहकार (Independent Sexual Violence Adviser, ISVA) को निरन्तर सहयोग – तपाईं तिनीहरूलाई सिधै पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ वा SARC मार्फत सिफारिस गर्न सकिन्छ
· परामर्श सेवामा परामर्श मूल्याङ्कन र सिफारिस।
तपाईंले SARC लाई सम्पर्क गरेपछि, तपाईंलाई आवश्यक सहयोग दिनका लागि हाम्रो संकट कार्यकर्ताहरूको टोली उपलब्ध हुने छ।
संक्षेपमा भन्नु पर्दा टोली निम्न कुरामा सक्षम छ:
· तपाईंलाई उपलब्ध हुन सक्ने विभिन्न विकल्पहरूका बारेमा व्याख्या गर्न र त्यसपछि तपाईंले गर्ने निर्णयहरूमा तपाईंलाई साथ दिन;
· भावनात्मक र व्यावहारिक सहयोग प्रदान गर्न;
· तपाईंले कानुनी कार्यवाही अपनाउन चाहे वा नचाहे तापनि, तपाईंका आवश्यकतानुसार तपाईंलाई सबैभन्दा राम्रो सहयोग प्राप्त गर्नमा मद्दत गर्न र यसका लागि तपाईंसँग काम गर्न; र
· तपाईंले उत्पीडनका बारेमा प्रहरीलाई रिपोर्ट गर्न छनोट गरेमा, तपाईंसँग कानुनी सोधपूछ अगाडिका भेटहरू र अदालती सुनुवाईहरूमा उपस्थित हुने स्वतन्त्र यौन हिंसा सल्लाहकार (ISVA) सेवाका लागि सिफारिस गर्न।